Bhinzi chena neholiflower nesipinachi | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 17/04/2021 10:00 | Stews uye Soups Mapoka
Nhasi ndinogovana newe imwe yeaya madhishi epuni anokosheswa kana tembiricha ichidzikira, sezvakaitika kuchamhembe svondo rino. Zvipikiri nyemba chena neholiflower nespinashi iyo toni iyo muviri kubva kune yekutanga chipunu uye wova inoshamisa yakasarudzika dhishi iyo yekupedzisa yako yevhiki menyu.
Bhinzi idzi dzinokupa chikafu chakazara chose. Pamusoro pegumume ini ndawedzera kune iyi dhishi a huwandu hwakakosha hwemiriwo. Ini ndasarudza mune ino sipinachi uye koliflower iri mumwaka, asi iwe unogona chinja yechipiri neromanesco, chimwe chidimbu chatinogona kunakidzwa panguva ino yegore.
Kugadzirira idzi bhinzi chena neholiflower zvichave nyore kwazvo. Iwe unozongoda imwe chete chimbichimbi chekubika kubika bhinzi uye casserole kugadzirira muto. Iwe unogona zvakare kuzvigadzirira necheni dzakabikwa dzakabikwa, zvese zvinoenderana nenguva yaunofanira kubika. Unoshinga kuzviita here?
Iyi bhinzi neholiflower nesipinashi idhishi rakazara kwazvo, rakanakira kudziya pamazuva anotonhora. Nyora pasi recipe!
200 g. bhinzi chena yakanyorova maawa makumi maviri nemana
Ca hombe cauliflower
1 tablespoon nyanya nyanya
2 mashoma esipinashi
Bika bhinzi muhari inokurumidza nekarotsi uye pini yemunyu kwemaminitsi makumi maviri. Ipapo isu tinobvisa hari kubva pamoto uye rega kumanikidza kunyangarika kuti vakwanise kuvhura hari.
Tinotora nguva ku bika iyo koliflower mu florets kweinenge maminitsi mana; zvimwe kana uchizvifarira chaizvo.
Isu tinogadzirirawo hwaro. Kuti tiite izvi, tinopisa mafuraji matatu emafuta mupoto uye sunga anyanisi yakatemwa uye leek uye yakarongedzwa kwemaminitsi gumi.
Kana tangokwanisa kuvhura hari, tinopwanya mugirazi inosanganisa madhiri maviri emuto wekubika, macarrots, tomato paste ne ⅓ yekorifurawa yakabikwa. Isu tinowedzera uyu musanganiswa kune casserole uye sanganisa.
Pashure tinowedzera bhinzi, sipinashi, koliflower yasara uye zvishoma zvemuto wekubika, kana zvichidikanwa, uye uuye kumota kuti ubike iyo yese kwemaminetsi matatu kana mana.
Isu tinoshumira bhinzi chena neholiflower uye sipinashi inopisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Stews uye Soups Mapoka » Bhinzi chena neholiflower nespinashi
Dumplings akaiswa mumuriwo